Wayfire 0.5: Compiz-Akafuridzirwa Wayland Munyori Anosvika Neyekuvandudza kweMhuka Uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Wayfire 0.5 - Compiz-akafuridzirwa Wayland munyori anouya neanogonesa ekuvandudza uye nezvimwe
Darkcrizt | | Resources, Free Software
Kutanga kwe iyo nyowani vhezheni yeyakaumbwa server Nzira yemoto 0.5, mairi mifananidzo yakagadziridzwa naizvozvowo kudavirwa kweiyo interface kwakagadziridzwa zvakanyanya, kuwedzera kune izvo zvakare mune iyi vhezheni vhezheni zvimwe zvitsva zvinowedzerwa zvinoratidzwa.
Kune avo vasingazive nezveWayfire, iwe unofanirwa kuziva izvo uyu munyori anoshandisa Wayland.
Kune avo vasingazive Wayland, Munyori weWayland akafanana nemaneja emahwindo mune X11 nyika. Chaizvoizvo software iyi inobata kuronga zvese zvekuisa uye zvinoburitsa michina uye inogonesa ese akavhurwa mafomu.
Chinhu chinonakidza nezve Wayfire, ndizvozvo inotsigira kuwedzera kuburikidza nemapulagi uye inopa inochinja maitiro maitiro.
Iyo kodhi yeprojekiti yakanyorwa muC ++ uye inoparadzirwa pasi peMIT rezinesi. Nheyo yacho ndiyo wlroots raibhurari, yakagadziriswa nevanogadzira iyo Sway mushandisi nharaunda uye iyo inopa yakakosha mabasa ekuronga basa remubatanidzwa mutungamiriri anoenderana neWayland. Sepaneru, unogona kushandisa wf-shell kana LavaLauncher.
1 Main nhau dzeWayfire 0.5
2 Maitiro ekuisa Wayfire?
Main nhau dzeWayfire 0.5
Mune iyi vhezheni itsva yeWayfire kuedza kwakaitwa kugadzirisa latency kunoratidzwa uchishandisa zano rimwechete saWeston. Kunyangwe izvi zvichinyanya kutsamira pahardware, inogoneswa plugins, system mutoro, nezvimwe.
Dzakadzika tsika dzinoreva kuti Wayfire inobvumidza yakawanda nguva yevatengi kugadzirisa, saka yakaderera latency inotarisirwa. Kune rimwe divi, zvakadaro, zvakaderera zvakanyanya kukosha (semuenzaniso 1ms) zvinogona kureva kuti Wayfire pachayo haizove nenguva yakakwana yekudhirowa uyezve kusvetuka furemu, ichiwedzera latency.
Imwe yekuvandudza kunoitwa mushanduro iyi nyowani el tsigiro yekuisa zvinhu nguva dzose pamusoro pezvimwe zvirimo uye pamwe chete nazvo zvakare mifananidzo yakagadziridzwa uye izvi zvinoonekwa kana uchimhanyisa vswitch plugin, iyo inotarisira kuchinja pakati pematafura. Pane zvishandiso zvine touch skrini, kugona kushandura desktops nemaoko kunoitwa.
Uyewo, akawedzera rutsigiro rwewayland's Selection protocol, iyo inodikanwa kuti ishandise clipboard yepakati bhatani kunamatira, kuitisa kweprotocol kunowanzoitwa ne, wlroots saka Wayfire inoda mitsara mishoma chete kuti iite kuti ishande.
Uyewo yakawedzera rutsigiro rwekuburitsa simba rekubata yeWayland protocol, iyo inobvumira izvo zvinoburitswa zvishandiso kuchinjirwa kumagetsi ekuchengetedza modhi.
Nezve izvo zvitsva zvinowedzera iyo yakagashira iyo set wayfirefire-plugins-yekuwedzera yatinogona kuwana, semuenzaniso, mawedzera-ons e:
tsanangura: Iyo plugin yekukweva mitsara uye maumbirwo pachiratidziro seyakafukidzwa.
kumashure-kuona: Inokutendera iwe kumhanyisa akajairwa mapurogiramu kumashure.
chikwangwani-chizere: zviyero maonero kune yakazara skrini, kunyanya inobatsira kumitambo yeXwayland isingatsigire saizi.
mag: inopa yakawedzera maonero echikamu chebudiro sehwindo rakasiyana.
mvura: Inodhonza mvura inokonzeresa pa desktop yako, yakafanana zvikuru neyekutanga compiz yemvura plugin.
workspace-mazita- Inotaridza mazita enzvimbo dzekushandira kana uchichinja nemapulagi akasiyana, senge muOverBox.
bhenji, showrepaint: inoratidza iyo chaiyo furemu chiyero uye akagadzirwazve matunhu echiratidziri.
Maitiro ekuisa Wayfire?
Kune avo vanofarira kugona kuisa uyu munyori, vanogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Nzira iri nyore kuisa Wayfire iri kushandisa yako yekuisa script iyo inogona kushandiswa nenzira yakajairika muLinux.
Nokuda kweizvi isu tichaenda kuvhura terminal mune system uye tinyore mairi:
git clone https://github.com/WayfireWM/wf-install
./install.sh --prefix /opt/wayfire --stream 0.4.0
Zvimwe kune avo vanoshandisa Arch Linux, Manjaro, Arco Linux kana chero chimwe chinobva kubva kuArch Linux. Iko kuisirwa kunogona kuitwa zvakananga kubva kuArch repos:
sudo pacman -S wayfire
Munyaya ye Fedora inogona zvakare kuiswa kubva kune ayo ekuchengetedza ne:
sudo dnf install wayfire
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo unogona kubvunza chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Wayfire 0.5 - Compiz-akafuridzirwa Wayland munyori anouya neanogonesa ekuvandudza uye nezvimwe
ExTiX 20.8: yekutanga distro neLinux 5.8
MOK - chii ichocho? Zvese zvaunoda kuti uzive